Manao Ny Fangatahany Tohananà Hetsika Tselatra Fandihizana Ny Lehilahy Japoney Iray Ao Osaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2014 19:28 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, فارسی, Esperanto , Español, English
Sarinà hetsika tselatra fangataham-bady any Japana.
Hamela anao hipi-maso ka handatsa-dranomaso ity hetsika tselatra fangataham-bady miparitaka be ity, izay natao tany amin'ny Foibe fampielezampeon'i Osaka, ka hanontany tena raha hiteny “eny” ravehivavy.
Ny lohateny nadika an'ilay lahatsary dia “Hetsika Tselatra Fangataham-bady Tampoka tao amin'ny Foibe fampielezampeon'i Osaka.” Nahangona mpijery an-tapitrisany io lahatsary io hatramin'ny namoahana azy tao amin'ny YouTube.
Manomboka amin'ny fampisehoana mpifankatia miray latabatra any aminà tany malalaky ny Foibe fampielezampeo'i Osaka io lahatsary io. Misy andian'olona mandalo, raha mitafatafa moramora kosa ireto mpifankatia. Tampoka eo, mijaridina am-pitoerana ireo mpandalo, izay misarika ny mason'ny rehetra eo amin'ny kianja.
Tsy ela, misy andian'olona marobe mitsinjaka amin'ny hira Louder an'ilay Filipina malaza mpiangaly “pop”, Charice.
Rehefa nirotsaka an-tsehatra ihany koa ilay lehilahy nipetraka teo amin'ny latabatra, dia sadaikatra ity olon-tiany, mandra-pisintomana azy ho eo amin'ny fandiavana mena.
Mangataka ilay lehilahy ary (fanimbana ny tsirony: tandremo!) manaiky ravehivavy, raha latsa-dranomaso ireo mpijery, na nandray anjara tanatin'ilay hetsika tselatra voaomana mialoha izy ireo na tsia.
Ity fangataham-bady amin'ny fomba vaovao ity dia vokatry ny orinasa mpikarakara hetsika sy fampiroboroboana ao Osaka, “Emotion Rise”, izay hatreto dia nikarakara hetsika tselatra maherin'ny 300.
Afaka jerena ao amin'ny fantsona YouTube-n'izy ireo ireo hetsika tselatra maro fangataham-bady nokarakarain'ny “Emotion Rise”.
Isaorana ny mpamaky, @FromNazWithLove, izay nanamarika fa avy any Filipina i Charice, fa tsy avy any Japana!
13 ora izayKambodza
1 andro izayVietnam